Fony mbola tao anatin’ny tsy fahasalamana i Fafah, tsy afaka niaka-tsehatra. Nahateny tamin’ireo namany i Dadah fa tsy vitany ny hiantsehatra tsy misy feon’i Fafah, izay no antony nakana an’i Ony ao amin’ny Mahaleo Zandriny. Tsy ny vola akory no tanjon’ireo Mahaleo zandriny hiara-kiasa amin’ny Zokiny, efa samy manana anton’asa izy ireo, hoy i Vola Ralambomanana, ray mpiahy ireo Mahaleo zandriny.
Naka tahaka Dadah ny Rebika
Ny Rebika koa tetsy an-daniny lazain’ny mpankafy fa nandova ny mozikan’ny tarika Mahaleo, tsy nanda izany ny Tarika Rebika. “Reharehanay ny ilazana fa Mahaleo taty aoriana izahay. Naka sopapa tamin’ny fomba fanoratana sy fihira ary mozika tamin’ny Mahaleo izahay, indrindra ny an’i Dadah. Nisy fotoana efa niarahanay niara-niaka-tsehatra, raha tsy hilaza afa tsy ny teny Bevalala sy Atsonjombe. hahatsiarovako manokana an’i Dadah ny toetrany izay malefaka tahaka ny feony, mpanakanto avo lenta nefa tsy sarotiny.” Hoy i Rampal Rakotomalala, ao amin’ny tarika Rebika.
Mafy orina hatrany amin’ny EPP ny tarika
Efa tsara tefy hatrany amin’ny fanabeazana fototra tany Antsirabe ry Mahaleo. “Efa hatrany amin’ny EPP, CEG, Lisea Antsirabe no niray hina ka hatrany Ankatso ary teo amin’ny sehatry ny asa ny ekipan’i Mahaleo. Efa nanana ny tarika “Le moineau”izy ireo tamin’izany. Nifanampy tamin’ny fiainana, hatramin’ny fandoavana saram-pianarana aza ry zalahy”, hoy i Jean-Bà na Jean Baptiste Razafimamonjy, mpitahiry ny rakitriniela ao amin’ny Tarika Mahaleo. Nosalorana ny mariboninahitra Grand Croix de l’ordre national moa i Dadah omaly ka ny praiminisitra Ntsay Christian no nitarika ny delegasionina avy amin’ny fitondram-panjakana nanatanteraka izany sady nankahery ny fianakaviana.